Ngisho neFlat Fish Float | Martech Zone
Ngisho ne-Dead Fish Float
NgeSonto, Novemba 22, 2009 NgoLwesine, ngo-Okthoba 4, 2012 UMat Nettleton
Ekukhuleni kwami ​​ngakhuliswa ngumuntu owayenethemba futhi engenathemba, Umama wami mhlawumbe wayengumuntu ojabule kakhulu kunabo bonke ongumngane omkhulu kunabo bonke owake wahlangana nabo. Wenza isiqiniseko sokuthi ngikhuliswe nginengqondo egcwele, engafiseli lutho okuhle kodwa kuwo wonke umuntu futhi ngenza konke okusemandleni ami ukusiza abantu. Ngenkathi ngiqala ukufunda nokukhula ngambuza ukuthi kungani esiza abanye abantu angabathandi nempendulo yakhe ibilula.
UMat wonke umuntu angaphila kangcono futhi ukubasiza kusiza umphakathi. Khumbula "ukuqhuma kwamagagasi kuphakamisa zonke izikebhe". Ngangingazi ukuthi umyalezo wakhe kwakuwumyalezo omkhulu engangizowuthatha ngifundele ezomnotho kamuva lapho ngifunda ekolishi. Ngaphinde ngafunda ukuthi uma kukhulunywa ngomnotho, lapho izinto sezihamba kahle “igagasi elinyukayo liphakamisa zonke izikebhe.”
Iminyaka yokuqhuma kweminyaka yama-90 yafakazela uMama wami kanye noprofesa bami be-econ bobabili bengongqondongqondo. Kwaphela iminyaka engaphezu kwengu-15 (kwaze kwaba ngu-2008) ukukhula kwezomnotho okwenyuka ngempela kwasiphakamisa isikebhe sawo wonke umuntu. Emabhizinisini amaningi amancane leyo minyaka yayihamba phambili, abathengi babeyinala, inzuzo yayinethezekile futhi ngomzamo othile kwakulula ukuphuma futhi uthole amathuba okulungele futhi akwazi ukukhulisa imali yakho.
Ngo-2008, enye ingxenye yomyalezo womzali wami yaqala ukuba nengqondo. Ubaba wami ungumfana omkhulu kepha ngokungafani noMama wami wayekwazi kahle ukugcina ingqondo yakhe igxile kokubi kwalokho okwakwenzeka empeleni. Umlayezo wakhe kimi wawuhluke kancane. Wangitshela Ngisho nezinhlanzi ezifile ziyantanta. Lokho ayeqonde ukuthi uma amagagasi enyuka yonke into inyukela phezulu kodwa hhayi konke kuyisikebhe. Iphuzu lakhe belilula impela, umnotho omubi awubenzi ubuthakathaka, umnotho omubi uveza ubuthakathaka.
Eminyakeni embalwa edlule besifunda ukuhlala nomyalezo kaBaba wami. Futhi ngo-WE, ngiqonde umnotho waseMelika. Sibonile inqwaba yamabhizinisi enza izinqumo ezimbi. Futhi lapho izikhathi zazilula lezo zinqumo zazibukeka zizinhle, zazingekho izinkinga zangempela noma imiphumela yezinqumo ezimbi. Kepha lapho nje sishayisa iqhubu emgwaqeni leyo miphumela yadalulwa futhi kaningi lokho kuvezwa kuholele ekwehlulekeni okuyinhlekelele.
Njengomqeqeshi wokuthengisa, ngichitha izinsuku zami ngisebenza nabaninimabhizinisi ababona uhlangothi olusha lwebhizinisi labo. Abathengisi ababecabanga ukuthi bakhulu bavele bangenzi lutho ngaphandle kokugibela igagasi lamakhasimende ambalwa abalulekile ayekhula. Abathengisi ababezimisele ukunciphisa intengo encane ngezikhathi ezimnandi bayabulawa manje njengoba bengenalutho ababuyela kulo ngaphandle kokwehla kwentengo.
Labo bathengisi abebengalindeli ngokungaguquki babuke umthamo wabo wokuthengisa wehla manje njengoba izimbangi zisongela ama-akhawunti azo. Eminyakeni emibili eyedlule lobuthakathaka kungenzeka abuzange bubaluleke, umnotho wawuqinile, abathengi babe baningi futhi ama-margins ayephilile. Umnotho ubukhula futhi unezinqubo zokuthengisa ezibuthakathaka futhi amaqembu okuthengisa angalungile ebeyizinkinga, kepha bekungezona izinkinga ezinkulu ngokwanele ukulungisa.
Namuhla sekuhlukile, ibhizinisi lakho libanjelwe ukuthunjwa. Ithimba lakho lokuthengisa liphethe ikusasa lakho futhi ngaphandle kokuthi wazi ukuthi basebenza ngecebo elifanele, ngesakhiwo esifanele futhi banamakhono afanele ngisho nokululama kuzoba yinselelo.
Tags: ukumaketha kwe-bluetooth
UMat Nettleton unomthelela omkhulu, umholi weqembu lokuthengisa onamandla nomqeqeshi onothando lwemiphumela nerekhodi eliqinisekisiwe. Ngineminyaka engaphezu kwengama-25 yesipiliyoni ngiqala ushintsho ekufinyeleleni imigomo nokwenza ngcono izinsiza zokuthuthukisa imali, ukuphathwa kwezindleko nokukhula kwenzuzo.
Ukuphawula Okunekhono: West Baden
Nov 22, 2009 ngo-2: 53 PM
Thanda isisho. Ingabe isihlobo esiseduze ne- "Ngisho newashi eliphukile lilungile kabili ngosuku?"